Shir looga hadlay Calaamadeynta Xudduudaha oo lagu qabtay magaalada Garoowe[Sawirro] | SAHAN ONLINE
Shir looga hadlay Calaamadeynta Xudduudaha oo lagu qabtay magaalada Garoowe[Sawirro]
GAROOWE – Shirkan oo laba maalmood ka socday magaalada Garoowe ayaa looga tashanayey calaamadeynta Xudduudaha degmooyinka ka hor inta aysan dhicin doorashada Puntland ee sanadkan 2019ka.
Shirkan ayaa waxaa ka qeybgalay Guddoomiyaasha degmooyinka Garoowe,Qardho,Laascaanood,Burtinle.Dangoroyo iyo qaar kamid ah degmooyinka kale ee dalka iyo mas’uuliyiin ka socotay Wasaarada Arrimaha gudaha Puntland.
Shirkan ayaa ,waxaa soo qabanqaabisay guddiga maamulka loo dhan yahay ee dallada ururada aan dokliga ahayn ee PUNSAA.
Madaxa Barnaamijka TWG ee Dimoqraadiyada Faaduma Diiriye Nuur ayaa ugu horeyn ka hadashay shirka,waxayna sheegtay in wadatashigan uu gogol u yahay doorashada 2019ka.
Arrinta waxay gogol dhig u tahay doorashada 2019ka ka dhici doonta Puntland inay ka sii shaqayno sidii ay xuduudaha loo kala cayimi lahaa, meelaha ay doorashadu ka dhacayso, sida meesha aad cashuuraha ka qaadataan, waa barnaamij la doonayo si wadajir ah ay uga wada shaqeeyaan shacabkii iyo ururada bulshada rayidka ah oo ay hoggaaminayso iyo dowladii”ayey tiri.
Xoghayaha Dallada PUNSAA Bashiir Siciid Ismaaciil ayaa sheegay in doorka dalloods ku kooban yahay sidii looga caawin lahaa dowladda gaar ahaana degmooyinka sidii loogu sameyn lahaa calaamadeynta Xuduudaha.
Bashiir Siciid Ismaaciil ayaa sheegay in ay shaacin doonaan dhawaan xogihii ay kasoo aruuriyeen sagaalka gobol taasoo ah daraasad ku saabsan xuduudaha cusub bishii January.
Shirkan ayaa sidoo kale ,waxaa ka hadlay Guddoomiyaasha degmooyinka Garoowe,Qardho,Laascaanood,Dangaryo iyo Burtile ,waxayan dhamaantood ka hadleen caqabadaha iyo dhibaatooyinka ka jira kala xadeynta la’aanta degmooyinka,iyagoona isku raacay iney muhiim tahay in la kala calaamadeeyo xuduudaha ka hor doorashada.
Dhanka kale Agaasimaga Waaxda Qorsheynta ee Wasaaradda Arrimaha gudaha Puntland Maxamed Cali Nuur(Jubba) oo shirka ka hadlay ayaa sheegay in degmooyin tirabadan la sameeyey burburkii kadib iyadoo aan la racen shuruucda iyo xeerarka la xiriira sameynta degmooyinka taasina ay dhalisay Is-qabqabsi iyo khilaaf ka dhexjira degmooyinka ee dhinaca Xuduudaha.
Dowlada Puntland oo la saasay 1998dii, waxay ka koobnayd 5 gobol iyo 22 degmo oo ay ku jirtay degmadda buuhoodle, hase yeeshee hadda waxaa ka jira Puntland 9 Gobol iyo in ka badan 45 degmo oo kala degmooyinkaasi laga sameeyay gobolkii Bari la isku oran jiray.
Al-Shabaab oo saddex qof ku toogtay fagaare ku yaal deegaan ka tirsan Sh/Hoose
Baydhabo oo lagu qabtay gaari siday walxaha Qarxa